အမေရိကန် King ကောင်တီရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး J&J ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ သွေးခဲရောဂါဖြင့်သေဆုံး - Xinhua News Agency
King ကောင်တီတွင် နေထိုင်သော အသက် ၃၀ ကျော် ၄၀ နီးပါး အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၌ Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူပြီးနောက် ပထမဦးဆုံး သွေးခဲသောရောဂါလက္ခဏာဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရသည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာကြောင်း ဒေသခံ ကျန်းမာရေးအရာရှိများက အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းအမျိုးသမီးသည် သြဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ပြီးနောက် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း Seattle & King ကောင်တီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“၎င်းသေဆုံးရခြင်းသည် J&J ကာကွယ်ဆေးထိုးသူများတွင် ဖြစ်ခဲသော်လည်း ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့် TTS (သွေးခဲခြင်း- thrombocytopenia လက္ခဏာ) ဖြင့် သေဆုံးသည်ဟုသတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရသည်။ ယင်းဆေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အကဲဖြတ်စီမံချက်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) က အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း’’ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦးအား အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
J&J ကာကွယ်ဆေး၏ ရှုပ်ထွေးသော နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ၏ အန္တရာယ်အားလေ့လာရန် CDC သည် ယခုနှစ် ဧပြီလတွင် ယင်းကာကွယ်ဆေးအသုံးပြုခွင့်အား ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ J&Jကာကွယ်ဆေးအားအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အန္တရာယ်ထက် အကျိုးကျေးဇူးပိုများကြောင်း CDC မှ သုံးသပ်ခဲ့သည်ဟု ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၈ ရက်အထိ J&J ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသူ ၁၂.၅ သန်းတွင် ၃၈ ဦးမှာ TTS ရောဂါခံစားခဲ့ရကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး အများစုမှာ ပြန်လည်ကျန်းမာလာပြီဖြစ်ကြောင်း CDC က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၄၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးများသည် အသက် ၅၀ နှစ်နှင့် အထက် အမျိုးသမီးများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ပိုများကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၄၉ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးများအတွက် အခြားကာကွယ်ဆေးများ ရွေးချယ်စရာရှိကြောင်းနှင့် TTS အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေးရန် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
U.S. King County woman dies from rare blood-clotting syndrome from J&J vaccine
SAN FRANCISCO, Oct.5(Xinhua) — A King County female resident in her late 30s has become the first person in the U.S. state of Washington who died fromarare blood-clotting syndrome after receiving the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine, local health officials said Tuesday.
The woman received her shot on Aug. 26, and died on Sept. 7, according toastatement from the Public Health Department of Seattle & King County.
“Her cause of death was determined to be thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS),acondition that has been identified asarare but potentially serious adverse event in people who received the J&J vaccine. The diagnosis was confirmed by the CDC’s Clinical Immunization Safety Assessment Project,” the statement said.
The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has reported only three other confirmed deaths nationally, it added.
In April of this year, the CDC paused its authorization of the J&J vaccine to study the risks from these rare complications. According to the statement, the CDC concluded that the benefits outweigh the risks for continued use of the J&J vaccine.
Women aged 18-49 are at higher risk for these adverse events compared to women 50 years and older.
The statement argued that it is important to provide education about the risk for TTS and the availability of other COVID-19 vaccine options, particularly for women aged 18-49 years. Enditem